I-instagram & apos; s & apos; gcina uyilo 'inqaku likuvumela ukuba uqale iposti kwaye ugcine kamva
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Instagram kunye ne-apos; 'Gcina uyilo' luyakuvumela ukuba uqale ngeposi kwaye ugcine kamva
I-Instagram kunye ne-apos; 'Gcina uyilo' luyakuvumela ukuba uqale ngeposi kwaye ugcine kamva
Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, sibonile i-Instagram yenza iinzame ezininzi zokongeza amanqaku amatsha eqongeni lokwabelana ngezithombe. Ezi zinto zintsha bezisikhumbuza kakhulu into ebisenziwa yi-Snapchat kunye neeapos ixesha elide, kwaye ayinguye wonke umntu owonwabileyo ngotshintsho olwenzekayo. Ngelixa i-Snapchat yinkonzo oyisebenzisayo ukuthumela iifoto kunye neevidiyo ngaphandle kokucinga okanye ixesha lokuzihlela, i-Instagram ibisoloko iyindawo yokwabelana ngezi zinto zinye, nangona zihlala zinomgangatho ophakamileyo kwaye zicingelwa ngakumbi. Kwimeko yamva nje inkampani eqengqelekayo kwi-app, kujongeka ngathi i-Instagram iphulaphule umva kwinto eyayenziwe ukuba ibeyinkonzo-indawo yokwabelana kakuhle ngeefoto kunye nabahlobo kunye nosapho.
Inqaku elitsha lihamba ngegama elithi 'Gcina uyilo', kwaye iyazichaza intle. Ukusukela oko yaphehlelela ngaphezulu kweminyaka emi-6 eyadlulayo, i-Instagram ayivumanga abasebenzisi bayo ukuba basebenze kwisithuba kwaye basigcine njengeyilo lokusebenza kuyo kamva. Ibe yenye yezona mpawu zibonakalayo zingaziwayo kule minyaka idlulileyo, kwaye namhlanje ekugqibeleni ikhutshelwa kuzo zonke iiapps & abasebenzisi beapos. I-apos ifumanekile kwinani elikhethiweyo labavavanyi be-beta malunga nenyanga ukuza kuthi ga ngoku, kwaye iiapos ngoku zenza ukuba kuhamba kancinci kuluntu.
Umsebenzi usebenza njani nangona? I-Apos ayothusi ngokulula. Nje ukuba ungene kwi-Instagram kwaye ufumane ifoto ofuna ukwabelana ngayo, kufuneka ubuncinci luhlobo oluthile lokuhlela olwenziwe kuyo (isiphumo, isicatshulwa, indawo, okanye icebo lokucoca ulwelo). Nje ukuba lube lunye olu hlengahlengiso lwenziweyo, kuya kufuneka ubuyele kwinqanaba lokuhlela apho wongeza khona amacebo okucoca ulwelo kunye neziphumo, chukumisa utolo lwangasemva phezulu kwesikrini, kwaye wena & ampos; ll emva koko uza kuyalelwa ukuba uyafuna ukugcina ifoto yakho njengedrafti okanye uyilahle. I-apos; into entle engabonakaliyo, kwaye nangona bekuya kuba mnandi ukuyifumana kule minyaka idlulileyo, kungcono kakhulu emva kwexesha kunangaphambili.
Ukuba awuyiboni into entsha kwi-app yakho ye-Instagram kwangoko, sukukhathazeka. Nangona inqaku elitsha liqalisile ukukhuphela kubasebenzisi namhlanje, kungathatha iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba isixhobo sakho sifikelele kuso.
umthombo: I-Instagram nge Engadget
Isamsung galaxy s7 Android nougat
iikhilikithi ezingenazingcingo ngolwesiHlanu ojongana ne-2016
Indlela yokuthatha umfanekiso weskrini kwiGalaxy Note 20 kunye neNqaku 20 ye-Ultra
Olona hlobo lubalulekileyo lweeGlass zokubukela kunye nemitya
I-Galaxy S6 inengxaki embi ngokuqaqamba kwemoto andisakwazi ukuma
I-Android 6.0.1 Marshmallow, iza kungekudala kwiNqaku 5 kufutshane nawe!
I-Samsung Galaxy Buds Live kunye ne-AirPods Pro
I-Apple ityhila iwaranti ye-iPhone 6 (kunye ne-6 Plus) yeendleko zokulungisa